Ahoana Raha Manao Zavatra Mampalahelo Ahy ny Namako? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Baoulé Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Goun Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kachin Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mongol Mooré Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Nzema Népali Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ayacucho) Quiché Romanianina Rosianina Samoanina Sango Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tetun Dili Tiorka Tseky Tsonga Twi Télougou Urhobo Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa
Tsy maintsy misy foana ny olana rehefa mifandray amin’olona. Tsy lavorary na dia ny tena namanao be aza. Mety hiteny na hanao zavatra mampalahelo anao àry izy. Ianao koa anefa tsy lavorary. Mety ho efa nisy fotoana àry ianao nanao zavatra nampalahelo olon-kafa.—Jakoba 3:2.
Mety ho lasa mora malahelo ianao rehefa mijerijery ao amin’ny Internet. Hoy ny tanora iray antsoina hoe David: “Mety hitranga ny hoe rehefa iny ianao mijerijery ao amin’ny Internet iny no mahita ny sarin’ny namanao manao fety. Dia gaga ianao hoe maninona ianao no tsy nasainy. Dia lasa mieritreritra ianao hoe nivadika taminao izy, dia malahelo ianao.”
Azonao atao ny mianatra miatrika an’ilay olana.
Mandinika ny tenanao. Hoy ny Baiboly: “Aoka ianao tsy ho mora tezitra, fa ny fahatezerana mitoetra ao an-tratran’ny adala.”—Mpitoriteny 7:9.
“Rehefa atỳ aoriana dia hitanao hoe hay tsisy dikany akory ilay zavatra nahatezitra anao.”—Alyssa.
Eritrereto izao: Mora tezitra ve ianao? Maninona raha miezaka ny mba hahay handefitra kokoa?—Mpitoriteny 7:21, 22.
Mieritreritra ny soa ho azonao raha mamela heloka ianao. Hoy ny Baiboly: “Voninahitra ... ny mamela fahadisoana.”—Ohabolana 19:11.
“Mety hoe manana ny rariny ianao, nefa aleo mamela heloka. Tsy tsara raha hoe averimberinao tenenina aminy foana ny tsy nety nataony, dia miala tsiny aminao foana izy. Rehefa namela azy ianao, dia aza resahina intsony ilay izy.”—Mallory.
Eritrereto izao: Tena lehibe ve ilay olana? Sao dia afaka mamela heloka ianao, dia amin’izay ho mpinamana foana ianareo?—Kolosianina 3:13.
Raha andeha hifampiresaka amin’ny namanao ianao, isaky izao misy olana kely izao, dia hoatran’ny hoe avelanao hisokatra matetika ny varavarana dia miditra ao an-trano ny rivotra mamirifiry
Mieritreritra an’ilay namanao. Hoy ny Baiboly: “Aoka ny tsirairay aminareo hihevitra izay hahasoa ny hafa, fa tsy izay hahasoa ny tenany ihany.”—Filipianina 2:4.
“Rehefa mifankatia sy mifanaja ny mpinamana, dia lasa te handamina an’ilay olana haingana. Efa samy niezaka be mantsy ianao sy ilay namanao mba ho mpinamana. Dia tsy tianao raha hoe lasa tsy mpinamana intsony ianareo.”—Nicole.
Eritrereto izao: Hitanao hoe misy marina ihany ve ny hevitr’ilay namanao?—Filipianina 2:3.
Tadidio izao: Tsara raha amin’izao ianao dia mahay mizaka an’izany hoe malahelo noho ny nataon’ny namanao izany. Amin’izay mantsy ianao dia tsy ho sahirana rehefa tratran’izany rehefa lehibe.
Ny hevitra ny tanora toa anao
“Tsy voatery ifampiresahana daholo izao olana kely rehetra izao. Ny ahy raha mbola azoko hadinoina dia hadinoiko fotsiny amin’izao. Amin’izay mantsy izahay mpinamana foana. Fa tsy hoe isaky ny misy zavatra mampahatezitra dia resahina ilay izy.”—Kiana.
“Rehefa misy olana dia mieritreritra foana aho hoe: ‘Tena lehibe ve ilay izy ka ho lasa tsy mpinamana intsony izahay?’ Tsia foana ny valin’izany matetika.”—Treigh.
Te Hahazo Namana Tsara ve Ianao?
Mihevitra ny ankamaroan’ny olona hoe ilaina ny manana namana tsara. Inona no hanampy anao ho namana tsara? Misy toro lalana efatra avy ao amin’ny Baiboly ato amin’ity lahatsoratra ity.
Jereo ato ireo andinin-teny dimy hanampy anao ho tony, rehefa misy mampahatezitra anao.
Hizara Hizara Ahoana Raha Manao Zavatra Mampalahelo Ahy ny Namako?
ijwyp no. 75
Miezaha Hamela Heloka